Maxaa Ka Socda Marquette Park? • Dutchtown, St. Louis, MO
Maxaa Ka Socda Marquette Park?
Posted on Abriil 21st, 2021
Ku dhaji Twitter
Ku soo dir Email
Guga ayaa ku bilaabmaya bilow wanaagsan Marquette Park! Deriska ayaa durba ka faa'iideysanaya cimilada wanaagsan si ay uga baxaan oo ugu raaxaystaan ​​booska ku yaal bartamaha magaalada Dutchtown. Waxaan muddo dheer u aqoonsaneyn Marquette Park inay tahay hanti aan caadi aheyn oo xaafaddeena ah, laakiin waxaa jira shaqo badan oo aan weli la qaban.
Tartanka Kubadda Kubbadda Cagta Marquette Maalinta
Ilaa hadda, waxaan horey u qabannay a tartanka kubbadda cagta taageerada Maalinta Bulshada Marquette. MCD waa dib-u-dhac ballaaran oo ku saabsan dhacdooyinka dugsiga ee ka dhacaya baarkinka bisha Ogosto. Waxay bixiyaan boorsooyinka dhabarka, qalabka dugsiga, dharka, timo jarista, iyo waxyaabo kale oo badan si ay uga caawiyaan carruurta Dutchtown inay bilaabaan sanad dugsiyeedkooda saxda. Waxaan leenahay lix iyo toban koox oo garoonka la geeyo tobannaan daawadayaal ah ayaa u yimid inay xididada u siibaan. Halkan ka daawo sawirro dheeri ah.
Tartanka rasmiga ah ayaa markii hore loo qorsheeyay dhamaadka bisha Maarso, laakiin taasi waxay ahayd duufaan-dabaylo isdaba joog ah oo 30 mayl saacaddiiba iyadoo qaar ka mid ah duufaannada culus ay ka dhigtay wax aan macquul ahayn in la ciyaaro. Ciyaaraha dib ayaan u dhignay, laakiin wali waan sameynay ka dhigtay inta ugu badan maalintii beerta nasashada. Deriska ayaa garaacay muusig iyo baalal la dubay iyo brats, caruur iyo waalidiin ayaa ciyaaray, qofna wuxuu lahaa himilo inuu keeno qaniinyo!
Madadaalo Axad Leh Marquette Park
Aad baan u baashaalnay galabadan Axadda ah waxaan dooneynaa inaan ka dhigno wax caadi ah. Goor dhow iman doona: Koonfurta Side Axadaha ee Marquette Park! Isha ku hay faahfaahin dheeraad ah oo soo socota.
Axadaha waa wakhti fiican oo la booqdo Marquette Park. Ku raaxayso goobta ciyaarta iyo meesha cagaaran, iskuna dheji si aad u qabato a Ciyaarta kubada cagta ee La Liga Latina.
Xilliga Xagaaga Jidka
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in sanadkii saddexaad oo xiriir ah, aan marti-gelin doonno Habeennada Filimka ee Marquette Park! Dhacdooyinkani waxay isu keeneen deriska, xitaa iyada oo loo marayo aafada, inay ku raaxaystaan ​​beerta nasashada, wax ka bartaan waxqabadyada bulshada, iyo inay qaataan madadaalo saaxiibtinimo oo saaxiibtinimo leh. Waxaan ku haysan doonnaa seddex habeen oo filim ah baarkinka xagaagan:
Sabtida, Juun 5th
Sabti, 24-ka Juulaay
Sabtida, August 28th
Waxaan rajeyneynaa inaan ka dhigno xagaaga ugu dambeeya Filimka Filim Quus-In ah barkadda-taas oo aan aad ugu faraxsanahay inaan aragno dib-u-furid xagaagan! Haysashada barkad weyn, bilaash ah, barkad dadweyne ah oo ku taal bartamaha xaafaddeenna waa hanti la yaab leh oo loogu talagalay carruurta iyo qoysaska ku nool Dutchtown.
Iyo Xarunta Madadaalada Marquette waa ilo kale oo weyn oo loogu talagalay carruurta deriska ah. Xagaagan, Xarunta Rec ayaa martigalin doonta kubbadda koleyga, feedhka, iyo kaamam kale kuwaas oo si dhakhso ah u buuxsamaya.
Wada-hawlgalayaasha Marquette Park
Waxaan haynaa koox deris ah oo heegan ah, oo ay ka mid yihiin Isbahaysiga Marquette Park iyo Shirkadda Koonfurta ee Dutchtown, iyagoo ku dadaalaya sidii ay dib ugu howlgelin lahaayeen beerta nasashada. Xadiiqadu waa hanti aad u qiimo badan oo loogu talagalay Dutchtown, mid ka mid ah bulshooyinka ugu cufan, ugu yar, iyo kuwa ugu saboolsan dhinaca Koonfurta.
Dutchtown South waxay soo abaabushay Bandhigga Codka Wadaagga ee beerta dhexdeeda bishii Sebtember, taas oo deriska isugu keenta muusikada iyo qoob-ka-ciyaarka. Waxay abaabuleen socod buugeed sheeko ah si farxadda akhriska loogu gaarsiiyo carruurta xaafadda. Shirkadda DSCC-na waxay la garab taagneyd deriskeenna iyadoo aan sii wadno inaan xoojinno hagaajinta shirkadda Marquette.
Isbahaysiga Marquette Park ayaa qabtay a lacag uruurinta 2019 taas oo kor u qaadday in ka badan $ 7,000 si loo siiyo kuraas iyo fadhiyo barkadda kale ee aan nadiif ahayn. Waxaan rajeyneynaa inaan dhigno alaabta cusub meesha sidii barkadda la furayo sanadkan. AMP waxay safka hore kaga jirtay qorshaynta dhacdooyinka waxayna soo jiidatay xiisaha iyo maalgashiga Marquette Park.
Caqabadaha ka taagan Marquette Park
In kasta oo aan jecel nahay inaan xoojinno waxyaabaha wanaagsan ee ka jira Marquette Park iyo guud ahaan Dutchtown, waa inaan ogaanno inaan ku dhibtoonnay inaan helno horumarka loo baahan yahay ee aan dooneyno inaan ku aragno Marquette. Marquette Park waxay ku soo hagaageysaa shaqo adag oo ka timid deriskeena iyo in kasta oo ay jiraan caqabado badan.
Barkadda Marquette Park waxaa muddo dheer ku hareereysnaa silsilad silsilad silsilad ah oo lagu xiray siligyo silig ah. Muddo sanado ah, waxaan codsanay in siligga siliggu hoos u soo dego. Si wax ku ool ah ugama hor istaagi doonto xadgudubka mararka qaarkood dhaca ee dhici kara, runtiina waxay noqon kartaa mas'uuliyad weyn oo xagga magaalada ah (akhri warqaddeenna ku saabsan mawduucaas).
Laakiin waxaa taas ka sii muhiimsan, xayndaabka carruurteenna iyo qoysaskeenna oo leh hareerahan adag iyo kuwa aan fiicnayn waxay gudbinaysaa farriin ah in macaamiisha barkadaha ay yihiin kuwa aan soo dhoweyn ka yar. Barkadeenu waa inaysan u ekaanin xabsi. Waxaan weydiisanay waqti iyo waqti markale siligga siligga leh si wax looga qabto, wax yarna nagama soo jawaabno marka laga tago ballamo yar oo la jebiyey.
Marka laga soo tago siligga sariirta lagu xiray iyo maqnaanshaha alaabta barkadda, qolalka qafiska (iyo Xarunta Rec oo ay ku jiraan) ayaa ku jira qaab aan wanaagsaneyn. Xarumaha ayaa isticmaali kara casriyeyn weyn, laakiin taa badalkeeda waxaa la soo daristay la'aanta xitaa dayactir aasaasi ah.
Halganka loogu jiro Ciyaartoyda Kubadda Cagta
Allies of Marquette Park sidoo kale waxay ka shaqeynayeen sidii loo heli lahaa hagaajinta xarumaha kubbadda cagta beerta nasashada. In kasta oo garoonka kubbadda cagta ay si joogto ah uga faa'iideystaan ​​La Liga Latina, kooxaha kubbadda cagta ee dhallinyarada, iyo deriska oo kaliya u soo baxa inay kubbadda laad laadaan, haddana agabyadu waa kuwo aan jirin. Dhawr meelood oo ah qoryo qudhun ah oo aan shabagyo lahayn ayaa calaamadeeya dhamaadka garoonka, kaas oo ay calaamadeeyeen godadka iyo godadka. Ciyaartoyda badanaa waxay u soo baxaan waqti ka hor waqtiga inay jarjaraan garoonka oo ay laftooda xarriiqaan.
Ku Sababbixinta Habeennada Filimka
Maaddaama aan jadwalayno Habeennada Filimkeenna waqti hore, waxaan siineynaa ogeysiis ballaaran magaalada in koox badan oo dadka deegaanka ah ay ku jiri doonaan baarkinka waqti cayiman. Waxaan wacnaa bilo, toddobaadyo, iyo maalmo kahor si aan u codsanno in qashinka la qaado oo cawska la jaro. Codsiyadaas badanaa lama dhageysto.
Kahor Habeen kasta oo Filim ah, mutadawiciinteennu waxay hubiyaan inay waqti siiyaan si ay u soo qaadaan qashinka ku ururaya agagaaraha Guriga Beerta iyo guud ahaan baarkinka. Qashin-qubka badanaa wuu buuxdhaafaa, sidaa darteed waa inaan qashinka kor u qaadno oo aan u qaadno meelaha qashinka lagu aaso ee u dhow Si loo hubiyo inaan uga tagnay jardiinada si ka wanaagsan sidii aan ku helnay, mutadawiciinteenna iyo shaqaale la kiraystay ayaa sii joogaya mugdiga si loo hubiyo in wax walba si habboon loo nadiifiyo.
Waxaan sidoo kale ku martiqaadaynaa Waaxda Booliska ee 'St. Louis Metropolitan' in loo diro saraakiisha kaqeyb qaadashada bulshada Habeenkeena Filimada - qasab maahan sababo nabadgelyo, laakiin waa in booliiska la siiyo fursad ay kula kulmaan oo ay uladhaqmaan bulshada ay u adeegaan. Booliisku wuu yimaaddaa, oo wuxuu istaaga cidhifka baarkinka meel u dhow meel aan laga arki karin, oo waligoodna kama soo degno baabuurtooda.
Guriga quruxda badan ee Marquette Park Field House waxaa lagu hagaajiyay qiime aad u badan tobankii sano ee la soo dhaafay. Si kastaba ha noqotee, waxay ahayd mid aad u liidata oo si dhakhso leh ugu dhacday burburka, midkoodna tayada shaqada dib u soo kabashada ama la'aanta dayactirka aasaasiga ah ee socda. Wiishka iyo nidaamyada qaboojiyaha ayaa fashilmay, taas oo ka dhigaysa guriga Field in aan la geli karin oo aan loo dulqaadan karin dhacdooyinka aan jeclaan lahayn in aan halkaa ku qabanno - waa haddii magaaladu bixiso ogolaansho oo ay nagala shaqeyso khidmadaha kirada ee xad-dhaafka ah.
Qolalka musqulaha ee Guriga Shaqada sidoo kale cillad bay leeyihiin. Natiijo ahaan, waa inaan ku siino musqulo la qaadan karo dhammaan dhacdooyinkeena. Kharashka sidaas lagu sameeyaa wuxuu ka yimaadaa miisaaniyad aan hore faa'iido u lahayn oo aan faa'iido doon ahayn. (Haddii aad jeceshahay inaad naga caawiso inaan miisaaniyaddaas wax yar ka sii dheereyno, halkan waad ku tabaruci kartaa.)
Mustaqbalka Marquette Park
Waxaan ku leenahay xaafad ku taal Dutchtown oo dooneysa una baahan inay isticmaasho Marquette Park. Waxaan leenahay koox daris ah oo sii kordheysa oo deriska ah iyo daneeyayaasha bulshada ee soo bandhigaya waqtigooda, dhididka, iyo dhaqaalaha si ay ugu qabtaan waxa ugu wanaagsan ee aan ku qaban karno kheyraadkeena yar.
Laakiin hogaaminta magaalada ma aysan galin waqti iyo dhaqaale si loo horumariyo hantidan cajiibka ah ee ku taal bartamaha magaalada Dutchtown taas oo u adeegi karta dad badan oo u baahan meelo ay aadaan iyo waxyaabo ay sameeyaan. Marquette Park waxay ku fadhiisataa bartamaha xaafad dadkeedu ka badan yahay halkii mayl laba jibbaaran in ka badan inta kale ee magaalada ka mid ah. Ku dhowaad 40% deriskeennu waxay ka yar yihiin da'da 18, iyo dakhliga dhexdhexaadka ah ee qoysaska ayaa aad uga hooseeya celcelis ahaan St.
Deriska Dutchtown waxay mudan yihiin inay dareemaan soo dhaweyn iyo badbaado Marquette Park. Waxaan dooneynaa in la gooyo cawska, qashinka la soo saaro, iyo silig goglan oo laga saaro. Waxaan rabnaa xarun nadiif ah oo ammaan ah. Waxaan rabnaa musqulo shaqeynaya. Deriskeenna iyo deriskeennuba waxyaalahan ayay u qalmaan.
Alderwoman Cara Spencer oo ku jirta xaafadda 20aad iyo Alderman Shane Cohn oo ku taal xaafadda 25aad ayaa labaduba taageeray oo riixay hagaajinta Marquette Park. Laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in inta badan jihooyinka iyo go'aannada la xiriira jardiinooyinka magaalada ay ka yimaadaan laanta fulinta — Xafiiska Duqa Magaalada iyo Guddiga Adeegga Dadweynaha.
Furitaankii Duqa Magaalada Tishaura O. Jones, waanu qabanay sameeyey rafcaan iyada iyo magaalada iyada oo loo cusbooneysiiyay xiisaha iyo maalgashiga Marquette Park. Waxaan rajeyneynaa inaan leenahay iskaashi raali ah oo karti leh Duqa Magaalada Jones iyo kooxdeeda. Waxaan rajeyneynaa ballanqaad aan ku dhiseyno Marquette Park ka wanaagsan iyo Dutchtown xoog leh. Duqa magaalada Jones iyo Magaalada St. Louis waxay lahaan doonaan koox jaar ah oo heersare ah gadaashooda. Waxaan rajeyneynaa inaan halkaan ku aragno dhowaan.
Haddii aad tan aqrineysid oo aadan kujirin xafiiska Duqa Magaalada, laakiin aad wali jeceshahay inaad caawiso, waxaad sameyn kartaa a hal mar or deeqda joogtada ah si ay nooga caawiso inaan howsha ka wadno Marquette Park iyo guud ahaan Dutchtown.
Filimka hoos Marquette Park. Muuji dhamaan qeybaha. Dutchtown iyo Marquette Park. Muuji qaybo yar.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay Abriil 21st, 2021 .
DutchtownSTL.org Marquette Park Maxaa Ka Socda Marquette Park?
DT2 • Bartamaha Magaalada Dutchtown
Isbahaysiga Marquette Park
English (English) • Español (Spanish) • SomGoal rss (Vietnamese) • العربية (Arabic) • বাংলা (Bengali) • Bosanski (Bosnian) • 简体 中文 (Chinese) • Français (French) • ဗမာ စာ (Burmese) • नेपाली (Nepali) • Afsoomaal ah (Somali)
Ku saabsan DutchtownSTL
2016–2021 DutchtownSTL iyo Downtown Dutchtown. Adiga oo isticmaalaya DutchtownSTL.org, waxaad ku raacsan tahay kuweenna Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo shuruudaha iyo xaaladaha. DutchtownSTL.org waxay isticmaashaa cookies si ay u siiso khibrad adeegsi wanaagsan iyo falanqaynta adeegsiga boggayaga.
Inbadan oo ku saabsan DutchtownSTL.org
Fiiri liistadayada ballaaran ee khayraadka xaafadda oo ay weheliyaan hagayaasheena:
Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta
Khabiirrada Horumarinta Xaafadaha
Boliiska: Yuu yahay, Xagee, iyo Goorma La Wacayo
Saraakiisha Lagu Soo Doortay Magaalada Dutchtown
Booqo annaga galka meelaha ku yaal Dutchtown oo ay ku jiraan makhaayado, baarar, dukaamo, adeegyo, iyo inbadan!
Soo hel macluumaad ku habboon xirfadlayaasha guryaha wax ku iibsiga iyo ku iibinta Dutchtown.
Ka caawi amp dib u hawlgeli Marquette Park!
Ururka Dutchtown West Neighborhood
Raadi wax ku saabsan DWNA, koox xaafad ah oo wax ka cunaysa kuwa galbeedka Grand.
SomGoal rss Vietnamese
Afsoomaal ah Somali